I-EIBOARD ye-LED Recordable Smart Blackboard sisizukulwana samva nje semveliso yeklasi yedijithali yemultimedia, yenzelwe ngokukodwa ukunceda ukufundisa ngobuchule, ibhodi yokubhala yemveli edityanisiweyo kunye netekhnoloji yokunxibelelana esebenzayo ukwenza isisombululo esitsha sokufundela. Ngoyilo lokubhala ngaphandle komthungo kunye nomphezulu omkhulu othe tyaba, yenza ukuba umxholo wokubhala webhodi yebhodi ube nomxholo we-imeyile kwaye ugcinwe ngokulula nangokufanelekileyo. Ubungakanani obukhoyo yi146″ 162″ kunye ne185″.
I-EIBOARD ye-LED Recordable Smart Blackboard ngumbono omtsha olungiselelwe isisombululo segumbi lokufundela.
Ibhodi ekrelekrele idibanisa ibhodi yemveli, ibhodi esebenzisanayo kunye neled touch flat panel ukwenza isisombululo esitsha.
Yenza ukuba umxholo wokubhala webhodi yebhodi ube nomxholo we-e kwaye ugcinwe ngokulula nangokufanelekileyo.
Ngoyilo lokubhala ngaphandle komthungo kunye nomphezulu omkhulu osicaba, yenza ukuba abasebenzisi abaninzi basebenze ngeendlela ezininzi zokusebenza ngaxeshanye.
Abasebenzisi bangabhala ngomnwe, ipeni, itshokhwe ngaxeshanye.
Phambi kokuba siyazi ibhodi yebhodi erekhodiweyo ye-LED, nceda ufunde ngezantsi ulwazi malunga nophuhliso lwesisombululo seklasi yemultimedia, emva koko uya kuyazi ukuba ivela njani ibhodi yebhodi erekhodiweyo ye-LED kwaye kutheni kufuneka amagumbi okufundela.
5. Isisombululo se-5th Gen yi-EIBOARD LED Recordable Smart Blackboard, eneenguqu ze-4 ukususela kwi-V1.0 iqaliswe kwi-2018. I-V3.0 kunye ne-V4.0 zithandwa kwaye zixabisekileyo. Yenziwe ngokutsha ngenene yonke into enye. Isombulula zonke iintlungu zentlungu ezingentla ze-4 kwaye idlula ukuguqulwa kwe-4 ngasentla.
I-LED Recordable Smart Blackboard inayo yonke imisebenzi ye-Interactive Smart Board, Projection, School Chalkboard, LED Interactive Touch Displays, Nano blackboard, Speakers, Visualizer, Controller, Pen Tray, njl.
1) I-LED Recordable Smart Blackboard inokurekhoda amanqaku okubhala ngesandla njengomxholo we-e kwiindlela zokusebenza ezininzi, kwaye ngokukhawuleza ukugcina.
Nayiphi na imveliso yokusetyenziswa kwemfundo kufuneka icinge ngawo onke amaqela kwicandelo lezemfundo. Ibhodi ebhalwe nge-LED erekhodiweyo yenzelwe ukudlala indima ebalulekileyo kwimfundo kwaye ikwalithuba elitsha lemfundo yale mihla yemarike yokufundisa eklasini.
Uninzi lwezikolo kusenokwenzeka ukuba sele zifakile izisombululo zebhodi yedijithali yemultimedia kumagumbi okufundela. Kodwa uninzi lwazo lwafakelwa okokuqala lunoguqulelo olusisiseko ukonga iindleko, yonke le nkqubo yayingagqibelelanga kwaye yayingalungelanga, kwaye izinga lokusetyenziswa kootitshala lalingekho phezulu, nto leyo eyayiza kuthatha inkcitho. Ngaphezu koko, ezi zixhobo zinokuthi zifakwe ixesha elide, ezininzi zazo azisekho ukusetyenziswa kwaye kufuneka zilungiswe kwaye zitshintshwe. Kwamanye amagumbi okufundela, inkqubo yebhodi yedijithali yemultimedia kusenokwenzeka ukuba ayizange ifakwe, kwaye bafuna isisombululo esitsha esixabisekileyo nesisebenzayo. Uyilo lwebhodi yebhodi ehlakaniphile erekhodiweyo ye-LED inokusombulula ezi ngxaki. Inokwandisa ukongiwa kweendleko zemfundo, inyuse izinga lokusetyenziswa kwezixhobo ngootitshala, ize inyuse ixabiso lezixhobo zokufundisa zemultimedia.
Phakathi kophuhliso lweminyaka emide yohlaziyo lweklasi elumkileyo, zonke izisombululo ezikhoyo zikhangeleka ziqhelekile kwaye zinengeniso eyi-0 phantsi kokhuphiswano oluxineneyo. Isisombululo esitsha esisodwa siyafuneka, kwiinzuzo zebhidi kunye nokuthengisa okulula. Umvelisi onamandla eR&D eyomeleleyo kunye nomthamo wemveliso ufuneka kakhulu njengenkxaso.
Ngamafutshane, yiyo loo nto ibhodi ebhalwe nge-LED erekhodiweyo ilithuba elitsha lemarike yemfundo.
Thina Iqela le-EIBAORD siya kuzama kangangoko kunye neenzame zokusebenzela imarike yezemfundo, siphucule ibhodi yethu erekhodiweyo erekhodiweyo, kwaye iyenze ixabiseke kakhulu kwaye isebenze kakuhle.
Ngaphambili: LED Interactive Touch Screen
Okulandelayo: I-Smart Blackboard FC-185EB
Igama lento I-LED Recordable Smart Blackboard
Umabonakude (Ngokuzithandela) Ifomathi yomfanekiso : PAL/SECAM/NTSC (Ngokhetho) ; Ukugcinwa kwesiteshi 200